အဖျော်ယမကာများ | Holland Trading Group
Werken bij HTG
HTG Liquors အပိုင်းသည် ကုန်သွယ်ရေးနှင့် လက်ကားဖြန့်ချိသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသို့ ထိပ်တန်းကုန်တံဆိပ်အမှတ်ရှိသည့် အဖျော်ယမကာများအားလုံး ဖြန့်ချိရောင်းချခြင်းအား အဓိကလုပ်ဆောင်ပါသည်။ ယင်းလုပ်ဆောင်မှုများကို ကုန်သွယ်ရေးနှင့် လက်ကားဖြန့်ချိခြင်းဟု ပိုင်းခြားနိုင်ပါသည်။ အဖျော်ယမကာများအပိုင်း လုပ်ကိုင်သည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီတိုင်းသည် ခြားနားသည့် ဆက်သွယ်မှုနှင့်ဈေးကွက်အမျိုးအစားများအား လုပ်ဆောင်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ဆောင်မှုများအတွက် နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်ရှိသော ကျွန်ုပ်တို့၏ လုံခြုံစိတ်ချရသည့်သိုလှောင်ရုံများတွင် ကုန်ပစ္စည်းများအားလုံး သိုလှောင်ခြင်း စစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်ပါသည်။ ယင်းနည်းလမ်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို မှန်ကန်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများအား အကောင်းမွန်ဆုံးဝန်ဆောင်မှုအဆင့်ဖြင့် ထောက်ပံ့မှုပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း သေချာစေပါသည်။
Hellwege, Anker Amsterdam Spirits, Square Dranken နှင့် Union Commerciale des Vins de France စသော ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်ကားဖြန့်ချိသည့်ကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့် မိမိကိုယ်ပိုင် လက်လီရောင်းချပေးသူများဖြစ်သည့် ဂျာမနီ၊ ပြင်သစ်နှင့် နယ်သာလန် ပြည်တွင်းဈေးဆိုင်များထံ အဖျော်ယမကာများ၊ ဘီယာများနှင့် ဝိုင်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်သိုလှောင်ရုံမှ ထောက်ပံ့ပေးထားပါသည်။
any brand, anywhere, anytime
Privacy & Cookie statement - ကုမ္ပဏီအသေးစိတ်အချက်အလက်များ - စည်းမျဉ်းများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ - မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက် - ဆက်သွယ်ရန်
Copyright (c) 2018 Holland Trading Group. All rights reserved.
Realization by HC Designs Webdesign Groningen